Umbutho woKhenketho waseArabhu kunye neNkampani yamaSilamsi yoPhuhliso lwamaCandelo aBucala asayina iMemorandam yokuQondana
Ikhaya » Amanqaku eendaba akutshanje » Utyalo mali » Umbutho woKhenketho waseArabhu kunye neNkampani yamaSilamsi yoPhuhliso lwamaCandelo aBucala asayina iMemorandam yokuQondana
Iindaba zeManyano • Ukwaphula Iindaba Zamanye Amazwe • Iindaba eziziiNdaba zokuHamba • Ukuhamba ngeshishini • Iindaba zikaRhulumente • Icandelo lokungenisa izihambi • Utyalo mali • iindaba • abantu • Xanduva • Iindaba zaseSaudi Arabia zokuPhula • Tourism • Intetho yezoKhenketho • Iimfihlo zohambo • Iindaba zeWired Travel • Iindaba ezahlukeneyo
Umbutho wamaSilamsi woPhuhliso lweCandelo labucala kunye noMbutho wezoKhenketho waseArabhu basayina iMemorandam yokuQondana kunye neNtsebenziswano
I-MOU ityikitye ukuseka isakhelo ngokubanzi sokuphuhliswa kwecandelo lezokhenketho ngokuxhasa ngemali iiprojekthi zokhenketho kwingingqi yeArabhu
Le memorandam izalisekisa iinjongo ze-ICD
Isicwangciso-qhinga se-ICD sijolise ekuxhaseni ngemali iiprojekthi zotyalo-mali ngeempembelelo zophuhliso kunye nokukhuthaza imisebenzi enxulumene nokwakha amandla
Inkqubo izakuxhasa ishishini lokhenketho kwilizwe lama-Arabhu, kugxininiswa kumazwe angaphuhlanga kangako
Phantsi kolawulo loBekekileyo uGqirha Bandar bin Fahd Al Fahid, Mongameli weArabic Organisation Organisation (ATO) - Mnu. Ayman Amin Sejiny, CEO we Umbutho wamaSilamsi woPhuhliso lweCandelo labucala (ICD), Ilungu leQela leBhanki yophuhliso lwamaSilamsi (IDBG), kunye noMnumzana Khaled Murad Reda - uSekela Nobhala Jikelele we-ATO, batyikitye imemorandam yokuqonda kunye nentsebenziswano ngokudibeneyo ukuseka isikhokelo ngokubanzi sokuphuhliswa kwecandelo lezokhenketho ngenkxaso mali. Iiprojekthi zokhenketho kwingingqi yeArabhu, kugxininiswa ngokukodwa kumazwe ase-Arabhu aphucukileyo.
Ngeli thuba, uMnu Ayman Sejiny uxele ukuba le memorandam izalisekisa iinjongo ze-ICD, ejonge ekuphuculeni nasekuphuculeni izakhiwo kunye neendlela zentsebenziswano phakathi kwamazwe angamalungu oMbutho weNtsebenziswano yamaSilamsi (kubandakanya amazwe ama-Arabhu), kunye ukuphendula kwiimfuno zabo ngokwandisa imali yeeprojekthi zophuhliso kunye nokwenza imisebenzi yokuxhasa ekhuthaza ukukhula koluntu kunye nokusebenza kweziko. Imemorandam ikwathanda ukumilisela isicwangciso-qhinga se-ICD, esijolise ekuxhaseni ngezimali iiprojekthi zotyalo-mali ngefuthe lophuhliso kunye nokukhuthaza imisebenzi enxulumene nokwakha amandla, ngakumbi kwimibutho ejongene nokukhuthaza utyalomali kunye norhwebo kumazwe angamalungu e-IDB. Ngaphandle koko, iMemorandam ifuna ukwakha ubudlelwane bokusebenzisana phakathi kwe-ICD kunye ne-ATO ngakumbi kwezi meko zangoku, apho icandelo lezokhenketho lichaphazeleke ngamandla ziziphumo zokusasazeka kwesifo saseCorona.
Kwelakhe icala, UMNumzana Al Fahid uvakalise ukonwaba kwakhe ngokusayina le memorandam apho kuzakunikezelwa khona iinkqubo ezininzi kunye nothethathethwano olunikezela kwaye luxhase ishishini lezokhenketho kwilizwe lama-Arabhu, kugxininiswa kumazwe angaphucukanga kangako ngokwaseburhulumenteni nakwabucala. amacandelo nee-SMEs, kunye nabatyali mali kwicandelo lezokhenketho, abachaphazeleka sisifo sikaCorona. Uye waphawula ukuba iMemorandam ibandakanya isicwangciso sokuphumeza imisebenzi eliqela kunye neeprojekthi eziza kuyilwa kungekudala, kubandakanya ukukhutshwa kwesukuk, ukuxhasa ngezimali iiprojekthi ze-SME, ukuxhasa ngezimali iiprojekthi zokhenketho zamaqabane e-ATO kumazwe aseArabhu ngenkxaso yezemali neyomthetho, kunye nokuxhamla ukusuka kumaqabane ayo acwangcisiweyo kwicandelo lokulungiselela izifundo zokucebisa ngeeprojekthi zemali. Ngapha koko, esi sicwangciso sibandakanya ukuthatha inxaxheba kutyalo-mali kwiingxowa-mali zasekhaya nezasentlalweni ngokuthe ngqo okanye ngokusebenzisa amazwe neebhanki kuthungelwano lweebhanki e-Afrika nakwiLizwe lama-Arabhu ukuze kuphuhliswe uluntu lwasekhaya kunye nokwenza ezokhenketho oluzinzileyo.